Isidoro avy any Sevila - Wikipedia
Isidoro avy any Sevila
I Isidoro avy any Sevila
I Isidoro avy any Sevila, na Isidoro fotsiny, dia arseveka tao Sevila any Espaina teo anelanelan'ny taona 601 sy 636. Teraka tao Kartagena tamin'ny taona 560 izy ary maty tao Sevila tamin'ny 04 Avrily 636. Atao hoe Isidorus Hispalensis izy amin'ny teny latina.
Nianatra tamin'ny monastera izy, izay notarihin'ny rahalahiny atao hoe Leandro nodimbiasiny amin'ny maha arsevekan'i Sevila. Nandray anjara tamin'ny fampiraisana ny Fiangonan'i Espaina izy tamin'ny nanaovany ko Kristiana "mpanaraka ny fampianarana marina" (ortodoksa) ny Visigoty, izay vahoaka resin'i Espaina tamin'ny taonjato faha-5 sady vahoaka nandray ny arianisma. Nitarika konsily maro izy, ka isan'izany ny konsily tao Toledo tamin'ny taona 633, izay nanapahana ny fikambaran'ny Fiangonana sy ny Fanjakana, ny fanorenana sekolin'ny eveka isaky ny diosezy ary ny fampiraisana ny fanao litorjia.
Niezaka nanangona ny fahalalana ivelan'ny fivavahana sy ara-pivavahana tamin'ny androny izy tao amin'ny raki-pahalalàna nosoratany misy boky roapolo atao hoe Etymologiae ("Fiforonan-teny" na "Fiandohana"). Tamin'ny Andro Antenantenany izany boky izany dia lasa fitaovam-pianarana safidin'ny mpianatra indrindra sady izany no asasoratra filamatra nandritra ny taonjato maro. Maro koa ny boky nosoratany momba ny teolojia, momba ny Soratra Masina, momba ny siantsa, ny fitsipiteny, ny haikintana, ary momba ny tantara.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Isidoro_avy_any_Sevila&oldid=977530"
Voaova farany tamin'ny 20 Novambra 2019 amin'ny 21:19 ity pejy ity.